१० बर्षे अद्भुत बालिका, मृत्युुको मुखमा पुगेकी ३ बर्षे बहिनीलाई स्विमिङ पुलबाट यसरी बचाईन ! [भिडियो]
अद्भुत बालिका, मृत्युुको मुखमा पुगेकी बहिनीलाई स्विमिङ पुलबाट यसरी बचाईन १० बर्षिया दिदिले ! [भिडियो]
अमेरिकाको एटलान्टा राज्यमा गत हप्ता एक ३ वर्षीया बालिका स्विमिङ पुलमा डुब्छीन्। ३ वर्षीया काली ड्यालिस र १० वर्षीया जेला ड्यालिस पौडी खेल्न एकै पटक स्विमिङ पुलमा हाम फाल्छन्। दिदी जेलाले स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न सक्छिन्। उनले स्विमिङ पुलको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्छिन्। बाहिर निस्कन्छिन्।
तर इनर ट्युबसहित हाम फालेकी ३ वर्षीया काली भने पानीमा पस्ने वित्तीकै पल्टिन्छिन्। उनले पौडी खेल्न नसकेपछि पानीमा डुब्छीन्। उनी पानीमा छटपटाइ रहेकी हुन्छिन्। तर जब जेलाले आफ्नी बहिनी पानीमा डुबेको देख्छिन्। उनी कुदेर पानीमा पस्छिन् र बहिनीलाई बाहिर निकाल्छिन्।
त्यस बेलासम्म बहिनी पानीभित्र डुबिसकेकी हुन्छिन्। उनले त्यस समयमा आफूले बहिनीको कपाल समाएर बाहिर निकालेको बताउँछिन्। च्यानल एक्सन २ न्युजसँग जेलाले भनिन्,‘बहिनी गह्रौ लाग्यो, त्यसैले कपालमा पक्रिए अनि उनको कम्मरमा पक्रिएर निकाले।’
त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शीले तक्काल उद्धारकर्तालाई बोलाए अस्पताल पुर्याए। काली यतिबेला स्वस्थ छिन्। आमा डानेसिया ड्यालिसले भनिन्,‘यो अद्भुत चमत्कार भयो। अब मैले कहिल्यै छोरीहरु आँखाबाट पर जान दिनेछैन।’ दिदी जेला समयमै कालीलाई बचाउन नपुगेको भए उनको कालीको ज्यानसमेत जान सक्थ्यो। यतिबेला अमेरिकामा जेलाको साहसको चर्चा भइरहेको छ। फक्स न्युजको सहयोगमा नेपाल खबर ।